China 304 Engagqwali Shower usetha ifektri abakhiqizi | ULeto
1.Imodeli No.: LT5734
izesekeli zokugezela okunethezeka isethi yokugeza matte imvula emnyama eshaji isetha ingcindezi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Isethi yeshawa yokuhambisa, nayo yonke izingxenye lapho ugeza. Ngempilo esezingeni eliphakeme futhi elula!
Izinto zekhwalithi ephezulu:Yenziwe ngobumsulwa obuphezulu bezinto zethusi, ukumelana nengcindezi ephezulu, ivimbela ukukhula kwamagciwane, ayingcolisi umthombo wamanzi, futhi isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu kanye nekhwalithi ephezulu yamanzi. Khulisa isikhathi sempilo
● Ishalofu elilula:Leli shelufu lingasetshenziselwa ukugcina izinto zokugeza ezifana nejel yokugeza ne-shampoo, okulula ukuyihlanza. Usebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ze-alloy, anti-scald, anti-ukuguga, ukumelana nokugqwala nempilo yesevisi ende
● Ishawa yokuvikela:nge-smart security lock, ukushisa okuzenzakalelayo okungaguquguquki kuma-38 ℃ ukuvimbela izinga lokushisa kwamanzi ukuthi liphakame kakhulu. Kungavimbela futhi izingane kanye nabantu abadala ekushisweni ngamanzi ngesikhathi besetshenziswa. Nikeza wonke umsebenzisi umuzwa wokugeza ophephile futhi onethezekile
● Umklamo Wanamuhla:Indawo yokugeza isebenzisa upende omnyama wokufafaza ukukhombisa ukubukeka komklamo wanamuhla. Ishalofu elinento ye-alloy. Ishawa esisebenza ngesandla esisodwa neshawa ephezulu engunxande engu-10 intshi. Ipayipi lokugeza elinamakhaza alilula futhi liyasebenziseka kalula. Induku yokugeza eguquguqukayo ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi abahlukahlukene
● Isevisi yokuthengisa ngemuva:Ngesikhathi sewaranti, uma umkhiqizo unezinkinga zekhwalithi noma eminye imibuzo, ungaxhumana nathi njalo. Singabantu at service yakho 24h
● Lesi shawa sisebenzisa ukubukeka kwesimanjemanje, kanti ingaphezulu lisebenzisa upende omnyama wokufafaza, okukhetha ukunambitha kwakho.
● Induku yokugeza yesethi yokugeza ingalungiswa ngobude, ngakho-ke ilungele izidingo zezinhlobo ezahlukene zomzimba.
● Ababili kusistimu eyodwa yokugeza, vula inkinobho yokunene ukushintsha indawo yokuphuma kwamanzi.
● I-hose shavu yokulwa ne-tangle ingaxhunywa kunoma iyiphi i-body intshi yokugeza umzimba, ngakho-ke ilungele cishe noma iyiphi indawo yokugezela.
● Ishawa engenhla inomsebenzi olwa ne-lime, onganikeza umfudlana wemvula ohloniphekile nohlala isikhathi eside.
● Upende wokufafaza omnyama ofakazelwe ungamelana nokugqwala, muhle futhi uhlala njalo.
● I-hose yensimbi engenasici engu-1.5m iyakhanya futhi iyaguquguquka futhi ingaletha amanzi kuwo wonke amasentimitha esikhumba sakho.
Igama lomkhiqizo Uhlelo lokugeza Izinto 304 engagqwali
Usayizi weCarton 92 * 41 * 91 cm Isisindo Sebhokisi 8 kg
Ubuningi beCarton Ama-7 ama-PC I-OEM / i-ODM Kuyamukeleka
Umbala Mnyama Ichweba I-Ningbo / iShanghai
Ukuphakama kokufakwa: 178-210 cm
Isisindo sisonke: 7000 g
Isisindo esikhulu: 7850 g
Ukupakisha: Ibhokisi elinsundu eligcwele
Usayizi weCarton: 91.5 * 40.5 * 91 cm
Amayunithi nge-Export Carton: ama-7 ama-PC
Isisindo esikhulu: 55 kg
Ivolumu: 0.337 m³
Langaphambilini Ukugeza Ngezandla kwe-LED
Olandelayo: 304 Insimbi Engagqwali Shattaf